ITrovaWeb neToduba: ukubambisana okusha phakathi kwe-Start Up Innovative
ITrovaWeb neToduba: ukubambisana okusha phakathi kwe-StartUp Innovative ne-App entsha
Isivumelwano kufinyelelwe phakathi kwama-Startups amasha we-Italy
I-TrovaWeb, ngesikhathi sakho Umgwaqo ingene kwi isivumelwano sokuhweba nama vertices we IToduba, enye ethembisayo ukuqala okuhle ogxile kuzo Blockchain ukuguqula imboni Izitembu zokudla.
I-TrovaWeb e E-Toduba: ngenxa Iziqalo zokuqalisa ezintsha zase-Italy bahlanganiswe ngobukhulu ukusebenzisana kwezentengiselwano kanye nabantu. Ngesikhathi semihlangano ehlukahlukene kaSepthemba 24 a eTurin, kufinyelelwe isivumelwano esizuzisayo se ukusatshalaliswa wezinto ezintsha App ukwenza i-elekthronikhi i Izitembu zokudla.
I-Toduba: uhlelo lokusebenza oluzoshintsha umqondo wevawusha yokudlela njengoba sazi
Ngesikhathi sesigaba I-piemontese i-del I-Roadshow 2019 della I-TrovaWeb yaseSicilian yokuqalisa, a isivumelwano sokuhweba ngama-vertices aphezulu we IToduba. Le nkampani yenze eyodwa uhlelo lokusebenza lokuguqula okuvumela ukuthi uguqule okwakho Izitembu zokudla sibonga u Blockchain. Obani abazuzayouhlelo lokusebenza di IToduba inezinzuzo kusuka endaweni yokubukwa intela nge- izinkampani, ezothuthukisa inqubo yokusatshalaliswa kanye nokuthengwa kwempahla izaphulelo zokudla. Ngasikhathi sinye, i ngasese abazisebenzisayo bangasusa "isisindo" izaphulelo zamakhadi ephepha noma epulasitiki. Kumahhala kunoma yikuphi ukucindezela okudala ngokomzimba, abasebenzisi abazokhetha IToduba bayonikeza izaphulelo zabo ku uhlelo lokusebenza olushesha kakhulu okwenza iningi le I-blockchain, nokwenza izikhathi ukukhokhisa e ukuthenga. Uhlelo lokusebenza lithembisa ukuthola isisombululo esisheshayo nesisebenzayo esidingweni esizwe kakhulu ezweni lebhizinisi.
Umhlangano phakathi kwe-StartUp emibili enhle yokwenza izinto: I-TrovaWeb neToduba bakha ubudlelwano obukhulu bokuhweba
I-TrovaWeb e I-Toduba, bobabili izinto zangempela zentengiso emelela ezimbili ezethembisa kakhulu ezintsha iziqalo zase-Italy, qinisa a isivumelwano sokuhweba ngalolu suku IsiTorinese, ngokushintshana kwe imisebenzi yezentengiso futhi of ukusatshalaliswa. I-Toduba, emfanekisweni kaDokotela IGianluca Enrichetti e I-TrovaWeb ekusizeni sabaphathi nge UMichele Coniglio e IGianni Arena, bazithola ngemuva kweminyaka engu-12 yobungani, benza isivumelwano esiqinile sokuhweba. Behlangene ngosesho olunamandla lokuqamba izinto ezintsha kanye nobungcweti bebhizinisi, abadlali abasenkampanini bebezazana isikhashana. Namuhla, ukusebenzisana kwabo nobuntu nakho kunikeze ubumbano kwezentengiselwano.
Inethiwekhi yokuthengisa ye IToduba izosabalalisa imikhiqizo ye I-TrovaWeb a eTurin nakho konke Piedmont, ngenkathi ITrovaweb, ngokusebenzisa ipulatifomu ye Abasebenza ngokuxhumana (ODC), izosabalalisa izinsizakalo ezinikezwe yi IToduba. Ukubambisana okuqinile, mhlawumbe okufiswa yisiphetho, phakathi kwezinkampani ezimbili ezitshale imali kakhulu kuzoemisha, ngenhloso yokuletha izinzuzo eziningi ukusuka endaweni yokubuka commerciale futhi sithuthukise izimpilo zethu zansuku zonke.
Tags: isivumelwano sokuhweba uhlelo lokusebenza olusha izaphulelo zokudla zikagesi ukuqala okuhle i-toduba thola